အဖြေက mitzvah ဖြစ်ပါသလား။ အရှင်ဘုရား Michael Avraham
အဖြေက mitzvah ဖြစ်ပါသလား။
Derech Chaim - ၅၇၆၉
ရမ်ဘန်းသည် တရားဟောရာကျမ်း (အခန်း L ၏အစ) တွင် teshuva ကိုပြုလုပ်ရန် mitzvah ရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ဤ mitzvah သည် ကျမ်းပိုဒ် (ibid.) မှ သင်ယူသည်) "သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားထံတော်၌ ရှဗဘတ်"။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ နောင်တတရား၏နိယာမများတွင် Maimonides (XNUMX:XNUMX၊ XNUMX) က ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဣသရေလလူမျိုး၏အဆုံးသတ်သည် နောင်တရမည်ဟု ဘုရားသခင်ထံမှ ကတိပေးထားကြောင်း ရေးသားထားသည်။ Maimonides ၏နည်းလမ်းတွင်လည်း နောင်တရရန် mitzvah ပါပါသလား။
הရာထူး (Mitzvah Shasad) နှင့် အခြားသူများက ဤအချက်တွင် ထင်ရှားသော ကွဲလွဲမှုကို ထောက်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် bပညတ်တော်ကျမ်း (Mitzvah Ag) Maimonides ကရေးသားခဲ့သည်
ဘု​ရား​သခင်​ရှေ့​တော်​မှာ ကျွန်​တော်​တို့​ပြစ်​မှား​ခဲ့​တဲ့ ဒု​စ​ရိုက်​အ​ပြစ်​တွေ​ကို ဝန်​ခံ​ဖို့ မိန့်မှာ​ထား​တဲ့​သူ​ဖြစ်​တယ်။
အဖြေထုတ်ရန် ဤနေရာတွင် အမိန့်မရှိပါ။ ဝန်ခံခြင်းကိစ္စသည် ဤနေရာတွင် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိသော မိဿဝဒတစ်ခုအဖြစ် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသည်- လူတစ်ဦးသည် ဝန်ခံလျှင် ဝန်ခံခြင်း (ဤအလုံးစုံတို့ကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်း) ဖြင့် ဝန်ခံခြင်းဟု ဆိုရမည်။ Teshuva လုပ်ခြင်းသည် ဤနေရာတွင် mitzvah နှင့်တူပုံမပေါ်ပေ (သတ်ရာတွင် အသားစားလိုသူတိုင်း ဥပဒေအရ သတ်ရမည်။ သတ်ခြင်းသည် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိသော mitzvah ဖြစ်သော်လည်း အသားစားခြင်းသည် mitzvah မဟုတ်ပါ။).
ဒါကို လင်ယောက်ျားက ကောက်ချက်ချတယ်။ ပညာရေးနည်းပြ (Mitzvah Shasad) အပြစ်ရှိသောသူသည် ပြန်မလာပါက နောင်တမယူခြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်လုံးဝ မရှိကြောင်း (ယခင်က ပြစ်မှုအတွက်သာ အပြစ်ပေးခံရမည်)။ နောင်တရ၍ ဝန်မခံလျှင်လည်း ဒါဝိဒ်ပြုသော မိဿဝဟ်ကို မပယ်ဖျက်ချေ၊ (၎င်းသည် အပြုသဘောဆောင်သော မိတ်ဇဝသ်မဟုတ်၊ 'ဖြစ်တည်မှု' မုဇ်ဗာဖြစ်ပြီး၊ ကျင့်သောသူသည် ဆုလာဘ်ရှိသော်လည်း ဖောက်ဖျက်သူတိုင်း၊ ၎င်းကိုမလုပ်ဘဲ၊ မည်သည့်အရာကိုမျှ ပယ်ဖျက်မည်မဟုတ်ပါ။)
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ နောင်တရခြင်း၏နိယာမများရှေ့ရှိ mitzvos ၏ပိုင်းဝေစာရင်းတွင် Maimonides က အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထားသည်။
ပညတ်တော်တစ်ခုက၊ အပြစ်သားသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ မိမိအပြစ်မှပြန်လာ၍ ဝန်ခံခြင်းဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် ကွဲပြားသော ပုံရိပ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဒုစရိုက်ကို ပြုသောသူသည် မကောင်းမှုမှ ပြန်လာရန် အမိန့်ပေးထားပြီး၊ ထို့အပြင် ဝန်ခံရန်လည်း အမိန့်ပေးထားသည်။ ဤတွင် အဖြေကို ထုလုပ်ထားသည့် matzah အဖြစ်တင်ပြထားပြီး၊ အဖြေတစ်ခုထုတ်ရန်နှင့် ဝန်ခံရန် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် Maimonidesb၏စကားများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ပညတ်တော်ကျမ်း. Maimonides ၏နည်းလမ်း၏ ရှင်းလင်းချက်တွင် ကွဲပြားသော လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး လက်ရှိအခြေအနေတွင် ၎င်းတို့သည် ဤကွဲလွဲမှုကို အတိအကျ မဖော်ပြထားပါ။ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု၏နားလည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ချက်ကိုဒီမှာကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ်။ ပညတ်တော်ကျမ်း အဖြေကို နားလည်သဘောပေါက်ပါ။
Maimonides ၏ ရှေ့တွင် အမြစ်လေးခုကို လေ့လာမှုတစ်ခုမှ တွေ့မြင်နိုင်သည်ပညတ်တော်ကျမ်း သူ၏ Maimonides သည် Torah တွင် ပြတ်သားစွာ ပညတ်ထားသော mitzvos များသာ အထမြောက်သည်။ Mitzvot သည် midrasha (ဒုတိယအမြစ်တွင် ကြည့်ပါ) သို့မဟုတ် Sabra မှ သို့မဟုတ် Knesset မှသင်ယူသော Mitzvot သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အထွတ်အထိပ်တွင် မပါဝင်ပါ။ သို့ဆိုလျှင်၊ တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော Dauriyta ထံမှအကြွေးများရှိနေနိုင်သည်။ပညတ်တော်ကျမ်း. နိဂုံးချုပ်ချက်မှာ မစ်ဇ်ဝဟ်သည် ထိုအရပ်၌ မပေါ်သေးသည့်အချက်မှာ မိဇဝသ်မဟုတ်ဟု မဆိုလိုပါ။
နောင်တရခြင်းဆိုင်ရာ ပညတ်တော်နှင့်ပတ်သက်၍ တိုရာ၌ အတိအလင်း ပညတ်တစ်ခုရှိပါသလား။ Maimonides ကျမ်းပိုဒ်အရ "သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအား ဥပုသ်နေ့" သည် ကတိတော်မဟုတ်ဘဲ ပညတ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ တိုင်ခ၊သန်မာသောလက် Maimonides သည် လုံးဝတာဝန်အဖြစ် နောင်တရရန် တာဝန်ကို ယူဆောင်လာသည်။ ယင်းအတွက် ဖြေရှင်းချက်မှာ စွဲချက်တစ်ခုရှိနေစဉ်၊ ၎င်းသည် သမ္မာကျမ်းစာမှမဟုတ်ဘဲ ဆာဘရာမှ ဆင်းသက်လာသောကြောင့် ၎င်းတွင် ပေါ်လာခြင်းမရှိပေ။Safamatz. ဆန့်ကျင်ဘက် bသန်မာသောလက် Maimonides သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ halakhic တာဝန်အားလုံးကို Torah မှ၊ midrasha မှဖြစ်စေ၊ Durban မှဖြစ်စေ ဓလေ့ထုံးတမ်းတစ်ခုမှဖြစ်စေ ယူဆောင်လာပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် နောင်တရရမည့်တာဝန်သည်လည်း ထိုနေရာတွင်ပေါ်လာပါသည်။
Maimonides အရ အနည်းဆုံး အဖြေတစ်ခုပေးရန် တာဝန်မှာ Sabra အပေါ် အခြေခံထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေခြင်းအတွက် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားသည့် ချန်နယ်တစ်ခု အမှန်တကယ် ရှိနေပါက၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Sabra မှ ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို အသုံးပြုရမည် (Bris တွင်ပါရှိသော Midrash ကိုကြည့်ပါ၊ Shaarei Teshuvah R.I. အတွက် အကျဉ်းသားတိုင်း သွားသင့်သည့် ထောင်ထဲတွင် လှေလှော်နေသည့် မြေအောက်အကြောင်း)။
ဤသည်မှာ H. Teshuvah Maimonides တွင် ဥပဒေများကို ဖော်ပြရုံသာမက Teshuvah ၏ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း ဖော်ပြသည့်အပြင် Teshuvah ရေးသားသူ၏ သီလကို ရွတ်ဆိုရခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် တာဝန်ကို အရင်းခံသည့် ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် တာဝန်ကို အရင်းခံသည့် Teshuvah (Ibid. F ကိုကြည့်ပါ)၊ ဖြေ။ Maimonides ၏ အခြားသော halachic ဖိုင်များတွင် ဤရေးသားမှုအမျိုးအစားကို ကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ပါ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ အဖြေတစ်ခုလုပ်ရမယ်၊ ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတာ ငါတို့ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်တာ ထွက်လာတယ်။ သူ၏ halakhic စာအုပ်တွင် Maimonides က mitzvah လုပ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ကြိုးစားရတဲ့ အကြောင်းရင်းက mitzvah (= အဖြေ) မရှိပါဘူး။ ၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည် Sabra တွင်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် Maimonides သည်ကျွန်ုပ်တို့အားထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မှာပင်မဖြစ်မနေလိုအပ်ကြောင်းနှင့်၎င်းသည်အရေးကြီးဆုံးပညတ်တော်များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ (ကြည့်ရှုပါ။ Lacham PG HG သည် လုပ်ရပ်အတွက် နောင်တမရသော သူသည် ၎င်းအတွက် တရားစွဲခံရမည်ဖြစ်ပြီး အမင်္ဂလာသည် အပြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟူသော စကားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ရာထူး အထက်က စာမပြန်တာ မုချ အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ လုပ်တာနဲ့ ကျန်တဲ့နှစ်ကြား ပိုင်းခြားမှု ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။)
ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ချက်များ၏အနားသတ်များတွင် အများအားဖြင့် halakhic တာဝန်များနှင့်ပတ်သက်သော ပညတ်တော်များမရှိခြင်းသည် halakhic dauriyta တွင်ပါဝင်ရန်လုံလောက်သောအရေးမပါခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိပါသည်။ သို့သော် ပညတ်တော်မရှိခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏ အရေးကြီးမှုနှင့် စေ့စပ်သေချာမှု အများစုကြောင့် အတိအကျ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပညတ်တော်များ ရှိပါသည်။ Gd ၏အုတ်မြစ်ဖြစ်သော mitzvos တွင်၊ Torah သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမိန့်မပေးပါရန်သတိထားပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် iteruta deltata မှဤသို့ပြုနိုင်သည်။
သူ့စာများတွင် ရဗ္ဗိသည် သီလနှင့် ပတ်သက်သည့် အလားတူ အခြေခံနိယာမကို ရေးထားသည်။ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တွင် အခြေခံကျသောအရာများတွင် အမိန့်မနာခံသူသည် ကြီးမြတ်သည်ဟူသော ကနဦးခံယူချက်ကို ခိုင်ခံ့မြဲမြံစေသည်ဟု ထိုနေရာ၌ သူရှင်းပြသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် တိုရာသည် ၎င်းတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အမိန့်ပေးခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ ဖြေဆိုရမည့်တာဝန်မှာ ဤအချက်၏ အဓိကဥပမာဖြစ်သည်။
Beit Yeshiva တစ်ခုလုံး၊ Rosh Yeshiva Shlita၊ အပ်နှံထားသော ဝန်ထမ်းများ၊ ချစ်လှစွာသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ ယေဘုယျအားဖြင့် Beit Yisrael တစ်ခုလုံး စာရေးကောင်းပြီး Tzaddiks စာအုပ်တွင် လက်မှတ်ပါရှိပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါသည်။ အောင်မြင်ပြီး သန့်ရှင်းသောနှစ်ဖြစ်ပါစေ ။ ကျန်းမာခြင်းတစ်နှစ် (အထူးသဖြင့် ချစ်လှစွာသောသားလေး Israel Yosef ben Ruth ben Tolila နှင့် ငါတို့အားလုံးအတွက်)။ Torah ၌ aliyah နှင့်အလုပ်လုပ်သောနှစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးအောင်မြင်ပါစေ။
 ဟုတ်တယ် သူ bလူ့ဘဝ, နှင့်Shaarei Teshuvah R.I.
 GRIP က သူ့အနက်ကို ပေးလိုက်ပေမယ့်ပညတ်တော်ကျမ်း Rasg ၏၊ Rasg နည်းလမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေကောင်းလာသောအခါတွင် အသားစားရန် mitzvah ပါရှိကြောင်း ရှင်းပြသည်၊၊ ဤသည်မှာ ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦးသည် အသားစားရုံမျှဖြင့် ကန့်သတ်ချက်မကျယ်ဘဲ ၎င်းကိုစားရန် mitzvah မရှိသည့်တိုင် သတ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေသည်လည်း သေချာပေါက်ရှိပါသည်။
 သူ၏ရူပါရုံသည် ရိုးရှင်းသည်- အမှန်စင်စစ် ဝန်ခံခြင်းမရှိဘဲ နောင်တရခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်ဆိုပါက၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းပြုခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပြစ်မှားပြီး ဝန်ခံခြင်းမရှိသော နောင်တရသူ၏ အခြေအနေသည် ပြစ်မှားပြီး နောင်တလုံးဝမရရှိသူထက် ဆိုးရွားပါသည်။ ဒါက မဖြစ်နိုင်တာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။
 အချို့သောအသေးစိတ်အချက်များပါ ၀ င်သော mitzvos ၏ဥပမာများစွာရှိသည်။ ဥပမာ- မျိုးစိတ်လေးမျိုး၏ ပညတ်တော် သို့မဟုတ် မြိတ် (အပြာနုရောင်နှင့် အဖြူဖျော့)။ Maimonides ၏ root XNUMX တွင် ဤအရာကို ကြည့်ပါ။
 အချို့သောသူများသည် mitzvos ၏ ပိုင်းဝေမှ Yishuv Ai ၏ mitzvah ၏ mitzvah မရှိခြင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး Maimonides သည်လည်း Torah မှ mitzvah ဖြစ်ကြောင်း အချို့သော အထောက်အထားများ ရှိသော်လည်း၊
 "Contribution and Challah: ပညတ်တော်များနှင့် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အကြား" ဆောင်းပါးများကိုလည်း ကြည့်ပါ။ မွန်းတည့် Kaz (အဲဒီမှာ mitzvos အမျိုးအစား နှစ်ခုကြားကို ခွဲခြားထားပါတယ်)။